Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Mexico » Hurricane Olaf lekwasịrị anya na Mexico
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Resorts • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ajọ Ifufe Olaf na-abịarute site n'ikike nke Weather Channel
Ajọ ifufe Olaf na -ebute oke ifufe na oke mmiri ozuzo na Baja California dị na Mexico na mgbede a ebe ntụrụndụ dị ọtụtụ na mpaghara ahụ.
Dị ka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Oké Ifufe nke United States si kwuo, ifufe nke na-ebili mmiri nke kilomita 105 n'otu awa na mmiri ozuzo na-ezo ruo sentimita 15 nwere ike ịdịgide ruo abalị niile.
A na-atụ anya na ajọ ifufe Olaf ga-aga ebe ugwu-ọdịda anyanwụ ma nwee ike gbasie ike tupu ọ daa n'ụsọ osimiri.
Emechiela ọdụ ụgbọ mmiri ruo nwa oge ma mepee ebe nchekwa. Ndị ọchụnta ego abanyela na windo ka ndị mmadụ na -eche n'ahịrị ịzụta ngwa ahịa na ngwa ahịa na nnukwu ụlọ ahịa.
Yabụ ọ bụrụ na COVID-19 emeela ma eleghị anya otu ihe dị mma, ọ kpatarala ọtụtụ n'ime ebe ntụrụndụ nwere ikike erughị 40% nke ndị ọbịa na ebe ha na-aga, ndị ga-agbaba.
Dabere na US National Hurricane Center, oke ifufe nke ifufe nke kilomita 105 kwa awa na mmiri ozuzo na-ezo ruo sentimita 15 nwere ike ịdịgide n'ime abalị niile nwere ike bute idei mmiri na apịtị apịtị.
Onye isi oche otu ụlọ oriri na nkwari akụ Los Cabos, Lilzi Orci, kwuru na a kagbuola ụgbọ elu ụgbọ elu 37 nke ụlọ na nke mba ụwa, na ọ mere atụmatụ na ndị njem ala ọzọ 20,000 nọ na mpaghara ahụ.
Ka abalị na-aga, Hurricane Olaf na-atụ anya na ọ ga-aga n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ na ọ ga-agbasi ike tupu ọ daa n'ụsọ osimiri.
Dị ka Obodo Ajọ Ifufe Mba, Olaf buru amụma na ọ ga -abịaru nso ma ọ bụ gafere akụkụ ndịda Baja California Sur n'abalị a na Fraịde. Ọnọdụ ajọ ifufe ebidola na mpaghara ndịda nke mpaghara ịdọ aka na ntị nke ajọ ifufe n'abalị a ma ga -agbasa n'akụkụ ugwu ruo Fraịde.
A na -atụ anya oke mmiri ozuzo metụtara Olaf n'akụkụ akụkụ ndịda Baja California Sur ruo Fraịde. Nke a ga-abụ ihe iyi egwu nke idei mmiri idei mmiri na apịtị apịtị na-eyi ndụ egwu.
“Oké ifufe Olaf na -akawanye njọ, ebili mmiri na -ada na nso @MontageLosCabos. Olaf buru ibu na ebili na ikuku na -ebuli. ”
Mmelite kachasị ọhụrụ na webụsaịtị gọọmentị gọọmentị National Oceanic and Atmospheric Administration na -ekwu:
Ihe onyonyo sitere na radar Mexico na Cabo San Lucas, yana onyonyo satịlaịtị, na -egosi na anya Olaf na -achọ ịdapụ na nso San Jose del Cabo, na ọnọdụ ajọ ifufe dị na anya anya ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ agbasaworị n'oké osimiri.
Ihu igwe ojii nwere ihu igwe ajụla oyi n'ime awa ole na ole gara aga, na ebumnuche siri ike sitere na usoro CIMSS ADT abawanyela 90 kt. Dabere na nke a na mmụba na nhazi nke nku anya na ihe onyonyo radar Cabo, a na -abawanye ike mbụ ruo 85 kt.
“N'elekere 7:40 nke abalị na San Jose del Cabo, mgbe ọ malitere ịdọwa n'ezie, mana tupu ike apụọ."
Mmegharị mbụ bụ 325/10. Olaf kwesịrị ịga n'ihu na-akwaga n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ na north-northwestward maka awa 12-24 na-esote, ebe etiti ahụ na-aga nso ma ọ bụ gafere akụkụ ndịda nke agwaetiti Baja California n'oge a. Mgbe nke ahụ gasị, mgbago dị n'etiti etiti na-agbada ọdịda anyanwụ site na ndịda ọdịda anyanwụ United States kwesịrị ime ka Olaf tụgharịa gaa ọdịda anyanwụ, nke a ga-esokwa ngagharị ndịda ndịda ọdịda anyanwụ ka oke ikuku na-esighị ike na-ebugharị site na ọkwa ala ugwu ọwụwa anyanwụ dị ala.
Ntụziaka amụma agbanweela ntakịrị kemgbe ndụmọdụ gara aga, egwu amụma ọhụụ nwere naanị obere mmezi site na amụma gara aga.
A na -atụ anya adịghị ike nwayọ nwayọ n'ime awa 24 mbụ ka Olaf na ndị Baja California na -emekọ ihe. Mgbe ajọ ifufe ahụ tụgharịrị n'ebe ọdịda anyanwụ ka awa 24 gachara, ọ kwesịrị ịgafe mmiri jụrụ oyi wee banye n'ikuku ikuku kpọrọ nkụ. Nchikota a kwesịrị ime ka convection mebie, ebe sistemụ na-adị ala karịa ebe okpomọkụ ebe awa 60 na ihe fọdụrụ ga-adị ala site na awa 72. Amụma amụma ike ọhụrụ nwere obere mgbanwe site na amụma gara aga, ọ dịkwa n'etiti envelopu nduzi siri ike.
Mexico nọ na -enwe nsogbu siri ike n'oge gara aga. Naanị ụbọchị 2 gara aga, a Ala ọma jijiji 7.1 gburu Acapulco.